မင်္ဂလာပါဂိမ်းမှညမ်းဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်:အပူပြင်းဆုံးအစက်အပြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာမည်သူမဆိုများအတွက်ပေးချင်သောမိမိတို့လက်ရရန် criminally ကောင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ကြောင်းခေါင်းစဉ်တွေကိုပတ်ပတ်လည်အခြေအပြန်အလှန်နှင့်တော့။ ကျွန်တော်တို့ဟာကျေနပ်စွာထိုးနိုင်စေဖို့တင်ဆက်ဖို့သင်အပြည့်အဝဂျီ၏ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာထဲမှာနီးနီးကပ်ကပ်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်သင်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းကိုအပေါ်ရေနွေးငွေ့သာအစားမှာရှာဖွေနေကီးေခေါင်းစဉ်မဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးအာရုံစိုက်ပါတယ်၊ကျနော်တို့သင်ပေးခြင်းအခွင့်အလမ်းထွက်ကြိုးစားဖို့အကောင်းဆုံးအချို့ၡမ်ားဖ်ာ္ေျ။, အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်လုပ်နေသောကြောင့်ဤကျနော်တို့သတိထားမိတဲ့ပြင်းထန်မရှိခြင်းပစ္စည်း၏အတွက်ဤနေရာသည်အရွယ်ရောက်စားထွက်ရှိသောလိုလားနိုင်မှပယ်တွင်လူရှုပ်နှင့်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်နှင့်အတူပစ္စည်းကိုကျနော်တို့ရရှိပါသည်။ ဒီရုံ၏အစအဦးညမ်းဂိမ်းအပေါ်ရေနွေးငွေ့နှင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ကြီးထွားလာအများအပြားဖြစ်လာမှအနှစ်အစိုးပလက်ဖောင်းအတွက်အာကာသများအတွက်မိတ်ဆွေချင်သောအဗားရှင်း၏ရေနွေးငွေ့မပါဘဲမဆိုသောက်သုံး။ တွေအကြောင်းပြောဆိုရန်ဒီမှာ၊ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုဖတ်ရှုဆက်လက်ငါသည်သင်သိစေပါလိမ့်မယ်မွတ္သားျခင္းညစ်ညမ်းဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်မီခင်ဗျားတက်လက်မှတ်ထိုး။, များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ပျော်မွေ့လာမယ့်သင့်ရဲ့နေထိုင်!
ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်နေစဉ်သင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အရေနွေးငွေ့၏အရွယ်ရောက်အမျိုးအစား၊အရာအားလုံးကိုကဒီမှာအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်–အခြားသူတယောက်မျှမတတ်နိုင်သည်မိမိတို့လက်ရရန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ အိုး၊နှင့်ဒုတိယအ၊ကျနော်တို့တစ်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်၏ခေါင်းစဉ်များ၊သင်ကြိုးစားမှ! လောလောဆယ်၊ကိုဒေတာဘေ့စအပါအ ၁၁၂ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၂ ထည့်သွင်းခံရလစဉ်အပေါ်အခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနှုန်းထားများ။ အကျိုးအဤချဉ်းကပ်မှုပေးခြင်း၏သင်အများအပြားအဖြစ်ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့အမှန်တကယ်အဘယ်အရာကိုရှာတွေ့အဖြစ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောထိုရျဖင့္ဂိမ်းများသောဝတ်စုံသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့အကျိုးစီးပွား။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနကိုညွှန်ပြသောလူများမနှစ်သက်ဘာမ်ိဳးဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိကြောင်းအနည်းငယ်ဂိမ်းများနှင့်နေစဉ်သူတို့ရှိစေခြင်းငှါအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုသို့တင်တို့ကို၊သူတို့မရှိပါဆိုရင်တော့အမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်၊သင်မွေ့လျော်ဖို့မသွားမယ့်အဖြစ်မည်သူမဆိုအတွက်ကောင်း၏။ ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ရေနွေးငွေ့သဘာဝဆွဲဆောင်ဖို့အရေအတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးခံရလိမ့်မည်ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။, ကျနော်တို့ခိုင်မြဲရန်ကျူးလွန်ဖြင့်ထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရန်အတူတကွသွင်းထားကြယ်မော်ကွန်း၏ဂိမ်းများနှင့်အဖွဲ့ဘာမှမမှာရပ်တန့်ကြလိမ့်မည်ထိပေးခြင်းအားသင်၏အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစား။ ဆိုရင်ဖျားနာပြီးမောပန်းများ၏အဆင့်အတန်းပိုနေမြဲကျားနေ၊ကျနော်တို့ကျေနပ်နေတဲ့အဖြစ်လာကြကိုပူဇော်နိုင်မှအကောင်းဆုံးအခြားရွေးချယ်စရာအဆင္ေတည်ရှိယနေ့စျေးကွက်အပေါ်!
တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ညမ်းဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။ ကျနော်တို့၏ကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းများခေါင်းစဉ်နှင့်သူတို့ကိုအဘယ်သူမျှမကုန်ကျမည်သင်သည်တစုံတခုအားကစား! နေစဉ်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာစီစဉ်ဖို့အနည်းငယ်ပရီမီယံခေါင်းစဉ်၊နားလည်အဖြစ်အဓိကအကြောင်းရင်း၏အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့၊ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီအချာအဖြစ်အခမဲ့အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိအနိုင်ရမှပေးဆောင်အဘယ်သူမျှမအချိန် gating–ပဲကြီးမြတ်ဂိမ်းကစားလးကစားသမားအားလုံးအထက်အခြား။ ကျနော်တို့ခိုင်တွင်ရောင်းချသောအယူအဆသင်အနိုင်ပေးပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲဘဲသြင္းသူတို့အတွက်နေဆဲတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောလုပ်ငန်း။, ကြည့်ရှုအကြိုက်များ၏လမ်းကြောင်းနှင်ဒဏ်နှင့်:သွားကြရန်ကြွလာသောအခါအပင်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း–ရုံနှစ်ခု၏ဥပမာများခေါင်းစဉ်အကြောင်းလုံးဝအတိမ္အအတွက်ရာသီဥတုသူတို့ပယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်အဘယ်အရာကိုသူတို့ရှိသည်နှင့်အကျဉ်းမျှပစ္စည်းအားလူမှဖွင့်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်။ သင်ရရှိပါသည်ပြီးမှလိုက်လျောညီထွေ၌ဤအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်းစားတဲ့အခမဲ့ကစားရန်ဂိမ်းအဘို့အပြာကားထုတ်လုပ်လမ်းများ၏အနာဂတ်!
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး၊အတည်ပြုသင့်အသက်အရွယ်နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခြင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်တယ်အကြောင်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်၊ဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံဖြင့်၊သင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သိမ်းပိုက်ကိုယ်တစ်မူထူးခြားတဲ့ဂိမ်းဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ လျှင်မဟုတ်ကြောင်းကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်ကဲ့သို့အသံ၏၊ထိုအခါအဘယ်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်တွင်ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဝေးဖတ်ပြီးသို့အစာ?, ငါသည်ကဒီမှာပြုသောအမှုနှင့်အစဉ်အငါသည်အတူဖြုန်းဖို့အပေါင်းတို့သည်နေ့ရက်နှင့်ညဉ့်လုံးအရေးအသားတက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့စာအုပ်အပေါ်အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်ဒီတော့မင်းကြီး၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာပိုကောင်းလက်ဝဲအစားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားမယ့်ဘာကိုအတွင်းအသိအမှန်တကယ်တွန်းအားပေးမှုအရာတစ်ဦးအစွန်းရောက်အဆင့်သင်ထင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ထဲတွင်ထိုအတူ၊သင့်ရဲ့မြည်းသို့ညမ်းဂိမ်းရေနွေးငွေ့အပေါ်အဘယ်အရာကိုမြင်သွားမယ့်–ၿငိမ္းခ်မ္းေရး!